FANARAHA-MASO NY FIFIDIANANA : Hanetsika ny mpikambana rehetra ao aminy ny Kmf/Cnoe
Hanamafy ny fanaraha-maso ny fifidianana ben’ny tanàna ny Kmf/Cnoe. Hetsehina avokoa ny rantsa-mangaika rehetra eny anivon’ny Distrika hisahana izany, hoy ny filoha nasionaliny, Andriamalazaray Andoniaina. 15 octobre 2019
Hojerena manokana koa, hoy izy ireo, ny mahakasika ny Faritra rehetra ahiana hisy tsy fahatomombanana amin’ny fifidianana toy ny hosoka na hala-bato. « Tsy maintsy hanara-maso ny fifidianana izahay, ny endrika itondrana ny fanaraha-maso dia miainga amin’ny alalan’ny fanetsehana ny mpikambana mivondrona eny anivon’ny renivohitry ny Distrika », hoy ny fanazavany. Manana mpikambana maherin’ ny arivo mielim patrana manerana an’i Madagasikara ity komity mpanara-maso ny fifidianana ity. Notsindriany anefa fa mianto-tena avokoa ireo mpanara-maso ny fifidianana ireo, fa tsy misy ny vola avy aty amin’ny foibe omena azy. Araka izany, mety ho voafetra ihany ny Faritra azony iasana.
« Ny eo anivon’ny renivohitry ny Distrika rehetra dia azo antoka fa ho voaara-maso avokoa fa tsy maintsy jerena koa anefa ireo ahiana hisy olana na dia ny any amin’ny Faritra lavitra indrindra aza », hoy hatrany ny fanazavan’ity filoha nasionalin’ ny Kmf/Cnoe ity.
Ankoatra ny fanaraha-maso ny zotram-pifidianana, isan’ny ahiahian’ny Kmf/Cnoe hiteraka korontana mandritra ny fanatontosana ny fifidianana ben’ny tanàna koa ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny Faritra sasantsasany manerana ny Nosy. Raha ity tsy fandriam-pahalemana ity mantsy no resahina dia efa nisy teto Madagasikara tokoa ny birao fandatsaham-bato nokorontanin’ny dahalo. Tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana faharoa farany teo, ohatra, dia isan’ny nahitana io tranga io ny birao fandatsaham-bato miisa telo tao amin’ny kaominina Ankomajia, Distrikan’i Mampikony.
Matetika koa rehefa misy ny sakoroka mandritra ny fifidianana dia ny mpanara-maso ny fifidianana hatrany no iangonan’ny rihatra. « Efa nisy mpanara-maso ny fifidianana naratra tamin’ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo noho ny disadisa nisy, ka mila jerena ny mahakasika izay satria tsy misy mahaverina ny ain’izay maratra amin’ireny », hoy hatrany Andriamalazaray Andoniaina.